अचेल अभिनेत्री पूजनालाई फिल्मखेल्न अफर आएको छैन - City Post Daily
अचेल अभिनेत्री पूजनालाई फिल्मखेल्न अफर आएको छैन
August 14, 2020 मनोरञ्जन
काठमाण्डौ,३० साउन । अचेल अभिनेत्री पूजनालाई फिल्मखेल्न खासै अफर आउने गरेको छैन । अभिनेत्री पूजना स्त्रीको पनि एक समय नेपाली फिल्ममा राम्रै माग थियो । केही सफल फिल्म दिएकी उनी लामो समयदेखि काँचको पर्दामा देखिएकी छैनन् । उनी अभिनीत पछिल्लो रिलिज फिल्म ‘चकलेट’ हो, जुन उनी आफैंले निर्माण गरेकी थिइन् । यसपछि उनले पिरियड ड्रामा ‘नालापानी’ मा काम गरिन् । तर, यो फिल्मको निर्माण पूरा भए पनि प्रदर्शनमा आउन सकेको छैन ।
यसको कारण फिल्म क्षेत्रमा मौलाएको ग्रुपिज्म रहेको उनको तर्क छ । उनले भनिन्, ‘मैले नचाहेर फिल्म नगरेको होइन । म फिल्मकर्मीको रोजाईमा नपरेको हुनसक्छु । अहिले यहाँ जो चलेको छ, उसैको पछाडि दौडने प्रथा छ । पुराना कलाकारलाई फिल्ममा स्थान दिन खोजिन्न ।’कसैको चाकडी नगरेका कारण पनि फिल्मको अफर कम भएको उनको कथन छ । तपाईं ग्रुपिज्मको शिकार हुनुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘त्यो त स्पष्ट छ । मैले फिल्म खेल्न कसैको चाकडी गरिनँ । न त कुनै ग्रुपसँग आबद्ध भएँ । मलाई त्यो गरेर फिल्म खेल्नु पनि छैन ।’ उनी चाँडै आफ्नै लगानीमा फिल्म बनाउँदैछिन् । उनका अनुसार, अहिले कथामा काम भइरहेको छ । अभिनेत्री पूजना आफूलाई फिल्म अफर ठप्पै भने नभएको बताउँछिन् । तर, उनलाई कुनै फिल्मको स्क्रिप्ट चित्त बुझेको छैन । उनले डेढ दशक अगाडि अभिनय गरेको ‘आँधी तुफान’ को सिक्वेल निर्माण हुँदैछ । तर, यो फिल्मका लागि आफूसँग निर्माताको कुराकानी नभएको उनको भनाई छ । एक समय फिल्ममा दिएको बोल्ड सिनका कारण उनको निकै चर्चा हुने गरेको थियो । पछिल्लो केही वर्षयता नेपाली फिल्ममा अघिल्लो पुस्ताको उपस्थिति न्यून छ । नयाँ छिमलका कलाकारहरुको आगमन बढेसँगै फिल्ममा काम पाउन छाडेपछि कति अमेरिका लगायतका देशमा पलायन भएका छन् । कति भने कामविहीन भएर बसेका छन् । जो चलेको छ, उसकै पछाडि दौडने प्रवृतिका कारण पनि अभिनयमा उम्दा पुराना कलाकारहरु ओझेलको पात्र बनेका छन् ।
यसैगरी, कोरोनाका कारण फिल्म क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । फिल्म निर्माण र प्रदर्शन नहुँदा कलाकारदेखि प्राविधिकसम्म घरमै सीमित भएका छन् । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ, कुनै निश्चित छैन । किनकि, सरकारले तत्काल फिल्म क्षेत्र खोल्न गम्भीर देखिएको छैन । पाँच महिनायता फिल्म सम्बन्धि कुनै कार्य नभए पनि श्रृंखलाबद्ध विवादले फिल्म क्षेत्रलाई सुनसान भने हुन दिएको छैन । यसअघि फिल्म क्षेत्रमा विभिन्न विषयलाई लिएर विवाद र बहस नभएका होइनन् । तर, त्यसले फिल्म क्षेत्रको चौघेरा नाघेको थिएन । यसपटक फिल्म क्षेत्रमा भएका विवादको विषयमा गाउँदेखि शहरसम्मका चिया पसलमा बहस चलेको छ । फिल्मकर्मीहरु एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिँदा फिल्म क्षेत्रको छवि धमिलिएको छ । फिल्मकर्मीप्रति हेर्ने नजर पनि परिवर्तन भएको छ । फिल्म क्षेत्रमा भइरहेका विवाद र आरोप–प्रत्यारोपको बारेमा दर्शकहरुले कलाकारलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् । अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीलाई सोमवार फेसबुकमा एक फ्यानले सोधे( ‘केही दिनयता फिल्म क्षेत्र सम्बन्धि धेरै विवाद र आरोप प्रत्यारोपहरु आइरहेका छन्, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?’ यसको जवाफमा वर्षाले कलाकार सम्यमित हुन जरुरी रहेको बताएकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘केही समयको लोकप्रियताका लागि मरिमेट्नु गलत हो । पब्लिक प्लेटफर्ममा आफ्नो विचार राख्दा सोच पु¥याउनु पर्छ । र, महत्त्वपूर्ण कुरा, डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न जरुरी छ ।’ उनको यो भनाईले लोकप्रियताका लागि विवाद उब्जाउनु र आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रनु गलत रहेको तर्क पेश गर्छ । तर, उनको यो टिप्पणी कोप्रति लक्षित हो ? बुझ्न चाहिँ सकिएन !
अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल एकसाथ दुईवटा भोजपुरी फिल्ममा अनुबन्ध
चैत ४ बाट फिल्म चिसो एस्ट्रे’ प्रदर्शनमा आउने
अनुगमन तथा कारवाहीलाई तीव्रता
राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षण अनिश्चितकालका लागि स्थगित